သတင်းထောက် Chad Sokol (၂/၂၁/၂၀၁၉) သို့ပေးပို့ခဲ့သောဂယ်ရီ Wilson မှ Donald Hilton သို့အီးမေးလ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
သတင်းထောက် Chad Sokol (2 / 21 / 2019) သို့ပေးပို့ခဲ့သောဂယ်ရီ Wilson မှ Donald Hilton သို့အီးမေးလ်။
Don Hilton, MD သို့ Gary Wilson ၏အီးမေးလ် PDF ။ ၎င်းကိုသတင်းထောက် Chad Sokol ထံပေးပို့ခဲ့သည်။
thu2/ 21 / 2019 4: 32 pm တွင်
ဤတွင်သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဟောင်းက UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause ဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများတန်ပြန်ရန်ဖန်တီးသော4အဓိကစာမျက်နှာများ:
ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသရေဖျက်မှုအရေးဆိုမှု (မတ်လ, 2018)
Prause ဖေဖော်ဝါရီ 23 ညီလာခံအတွက်စပီကာအနည်းဆုံးလေးနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်: ဒွန်ဟီလ်တန်, GAIL ထမင်းစားခန်း, ရွှံ့စေး Olsen နှင့် Stefanie Carnes ။ တဦးတည်း (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါနယူးမူးယစ်ဆေး, IITAP Fight) တစ်ဦးချင်းစီအမည်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မာတိကာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်: ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုနီကိုး Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု။ ဥပမာ - Prause စာမျက်နှာများရှိဤအပိုင်းများ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း၊
2014 Fall: Prause ၏မှတ်တမ်းဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Donald L. ဟီလ်တန်ဂျူနီယာ, MD အကြောင်းကိုထုတ်လုပ်သူများရိုက်ကူးဖို့လဲလျောင်း
အခြားသူများက - Prause မဟုတ်မမှန် Donald ဟီလ်တန်, MD စွပ်စွဲ
အခြားသူများ - ၂၀၁၆ နို ၀ င်ဘာလ။ ။ Mormon Matters Podcast တွင်ပါဝင်သူများအားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲပြောဆိုခြင်း။
ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမည်သူမဆိုဒေါက်တာ Prause4နှစ်ပေါင်းမဆိုတက္ကသိုလ်အားဖြင့်အလုပ်ရသေးကွောငျးသိရသငျ့သညျ။ UCLA နှင့်အတူသူမ၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမခံခဲ့ရပါဘူး။ မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause ကဆက်ပြောသည် နှစ်ခုမီဒီယာမန်နေဂျာ / ဖြစ်မြောက်ရေးကနေ မီဒီယာ2×3သူမ၏ကုမ္ပဏီ၏အလွန်သေးငယ်သောတည်ငြိမ်ရန် "ပူပေါင်းဆောင်ရွက်။ " သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန်ဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကွင်း၌တည်၏။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းအပြုအမူ။
ငါ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ် (ထိုမြင်ကွင်းများနောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာမှတ်ချက်များရာပေါင်းများစွာ) ခဲ့ကတည်းကကြောင့် Prause ရဲ့ tweets နှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်သူမ၏သားကောင်များ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့ပြု, နှင့်မည်သည့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။
အထောက်အထားပေါ်မှာထိုင်၏နှစ်ပေါင်းပြီးနောက် Prause ရဲ့တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော်မဟုတ်မမှန် "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူမ၏နောက်ယောင်ခံ" "misogyny", "သူမရဲ့မုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးအားမြှောက်" နှင့် "နာဇီလက်သစ်ဖြစ်ခြင်း၏သူမ၏အများအပြားသားကောင်များစွပ်စွဲ (ထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်ရေဖျက်မှုမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သည် "), ငါတို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆနျးစစျဖို့မဖြစ်မနေခံစားခဲ့ရကြောင်း။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က Prause ရေခဲတောင် PF ရုံပျဉ်းသောဤကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာ, created: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
ရှင်းနေသည်မှာ LA ကတှငျနထေိုငျသူမြား Prause သည်, ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမျိုးရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။ ဒီကိုကြည့်ပါ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ, အ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်လူဦး အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေ ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် သာအရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းဆုယူထားတဲ့ပြသ သီးသန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်.).
ထို့အပြင်က, Prause အထင်ရှားဆုံး porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်ဘာသာရပ်များအဖြစ် porn အဆိုတော်ရယူကြအံ့သောငှါပေါ်လာသော အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC-ရရှိသောဘာသာရပ်များစွပ်စွဲသူမများ၏စီးပွားဖြစ်အကျိုးစီးပွားအားကောင်းရန်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်လေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် အကြီးအကျယ်စှနျးဒါပေမယ့်ပုံ အကျိုးအမြတ်, "အော်ဂဇင်တှေးတောဆငျခွ" ကုမ္ပဏီ။ ဒီကိုကြည့်ပါ Twitter ကိုလဲလှယ် Prause နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသဘင်အကြား ပတ္တမြားကြီး Rubousky, သူသည် အဆိုပါလူကြီးဖျော်ဖြေမှုများမင်းသားများအစည်းအရုံး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (Prause ကတည်းကဒီချည်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်) ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, (ထိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတှကျအကြိုးကြောင်းတရားစွဲဆိုမှုအပေါ်သန်းပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့သော) ကို FSC သူမ၏ဒါခေါ်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူ Prause အကူအညီများကမ်းလှမ်းခဲ့သည် "တှ။ "
ဒီနေရာမှာအစစ်အမှန်နိုငျကငျြ့သူ Prause ခဲ့သည် သူမ၏တွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ပိတ်ပင်ထား နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံသည်။ အစားအချက်အလက်များထုတ်ဖော်၏, Prause ယောဟနျသ Adler MD (စတန်းဖို့ဒ်) တစ်နည်းနည်းနဲ့သူမ၏တွစ်တာချွတ်ကန်တယ်တဲ့အရပ်ရှည်ရှည်-ပုံပြင်လုပ်ကြံ။ Adler ကဤအတူဘာမှခဲ့။ Prause ချက်ချင်းသူမ၏စိတ်ကူးယဉ်တှနှင့်အတူသူတို့၏ "အကူအညီနဲ့" ကိုလက်ခံနိုင်ရန် FSC မေးလ်ပို့ပေး။ Prause ထို့နောက်ချက်ချင်း porn အတွက်ကွန်ဒုံးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးကို (porn စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အနေအထားကို) ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအကောင့်နဲ့ဆှေးနှေးဖို့အစပြု:
Prause ၏ဥပမာများစွာသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အဆိုတော်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ AVN နှင့် FSC တို့နှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်ဤစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း).
Prause အဆိုပါ AVN စည်းဝေးကြီးကိုတက်ရောက်သည် Prause ရှင်းလင်းစွာသူမက 2019 မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြ။
PornHarms (NCOSE) Trolling, Prause အခမဲ့တီရှပ်များကမ်းလှမ်း သူနှင့်အတူ trolls ဆန္ဒရှိအခြားသူများ။ အဆိုပါတီရှပ်များ၏တစ်အရသာမရှိသောပျက်လုံးများဖြစ်ကြသည် FTND porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာတီရှပ်များဦးသေဆုံး။ အဆိုပါ3ဆုရရှိသူ porn ကြယ်ပွများမှာ!
အဆိုပါ porn ကြယ်များ (Avalon) ၏တစ်ဦးကသြစတြေးလျကနေဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်သူကသူမ၏တစ်ဦးတီရှပ်တင်ပို့ရန်လည်းစျေးကြီးရဲ့ Prause ပြောပြသည်။ Prause Avalon သူမမှာသူမတီရှပ်ကောက်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မေးတယ် AVN ဆု (ထိုကြောင့်ငါတို့သည် Prause မတက်ရောက်ပါလိမ့်မည်ယူဆရမယ်) ။
Avalon ပုကိုခေါ် (အဆိုပါလူကြီးဗီဒီယိုဆုပေးပွဲမှာကောင်းသောအချိန်ရှိသည်ဖို့ Prause ပြောထားသည် အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏အော်စကာ).
တနည်းကား, ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိရာပေါင်းများစွာနောက်ထပ်ဥပမာရှိပါတယ်: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း